IHottoo yeHTC. Lowo ulibalekileyo. | I-Androidsis
el_uliulius | | nokuVavanyelwa, Izaziso, i-ROM
Malunga nonyaka omnye uya kwenza ukuba ndizuze Eyam yokuqala nokuVavanyelwa. Mna eyokuqala i-Android. Mi i-smartphone yokuqala Kananjalo (ezinye iisimboli ukuba bendinazo, kodwa andizithathi kanjalo). Iitheminali sele zikhona ezininzi ezilungileyonjenge IHTC Hero, iHTC Magic okanye iNexus One. Abanye Android zazininzi kodwa zazingafanele kuthenjwa.
Kwi-MWC yangaphambili eBarcelona, nokuVavanyelwa ibhengezwe ngovuyo olukhulu (njengalo nyaka) uhlaziyo lwesiphelo sendlela njengeHero okanye uMlingo ekupheleni kwe-MWC (babesele bezibhengeza ixesha elide, kodwa ngeli xesha kwakunzima). Inkqubo ye- I-Tattoo ibandakanyiwe kuzo zonke ukubheja kunye nokuVavanyelwa kwinkxaso yakhe yezobuchwephesha wathi bayayilungiselela. LULA. Abasebenzisi besi siginali baye baxokiswa kaninzi-ninzi kwinkxaso yezobuchwephesha, de kwaba lihlobo lokugqibela inyani yavela, ngeempendulo ezivela kwinkxaso yezobuchwephesha efana naleyo ifunyenwe ngumncedisi kwaye kwenzeka ukuba ikhutshelwe ngokoqobo.
Mnumzana XXXXXXXX, enkosi ngokunxibelelana neZiko leNkonzo yaBaxumi beHTC. Ngokumalunga nombuzo wakho, ndiyakwazisa ukuba okwangoku akukho sicwangciso sokuhlaziya isiphelo sendlela yeHTAT Tattoo. Iziphumo zohlalutyo lwethu zibonise ukuba uhlaziyo kwifowuni yakho lunokuchaphazela amava omsebenzisi kwaye ekugqibeleni ligqibe kwelokuba uhlaziyo alukhuthazwa. Ifowuni iza kuqhubeka nokufumana inkxaso, kwaye siyabulela ngomonde wakho kunye nokuqonda kwakho.
Enkosi kubantu abathanda Lokko de IHTCMania besine iROM ene-Android 1.6 yokusombulula iingxaki zebluetooth urhuqa i-HTC. Uluntu lwaqhubeka. Ukusukela I-XDA yaqala ukwenza iROM ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile lisebenze, enkosi kubasebenzisi abanjengoFyodor okanye i-Ikxdf. Kodwa sinelitye elinezihlangu zethu. Ikhamera. Akunakwenzeka nangayiphi na indlela ukulungisa ikhamera ye-damn ye-Android 2.1. Amagqabi eFyodor. Akukho thuba. Ikxdf, emva kokufumana iitoni zeminikelo yomsebenzisi kwiROM yayo kunye nokwenza ulindelo olungelulo, uyeke. Kwakungekho thuba okanye ithemba lokufumana ikhamera kwiTattoo yethu. Kodwa kwavela umntwana, umsebenzisi we-HTCMania, Iswekile seKalimocho, kwaye iROM yakho. Uphuhliso olude lweenguqulelo luqala ukusebenzisa oko abasebenzisi sele bekwenzile, kunye nokubeka uninzi lwenxalenye yabo. Iqhubela phambili ngokukhawuleza, kude kube ekugqibeleni, sinayo. Sinekhamera esebenzayo kwiROM yesonka seGinger !!! Thatha loo HTC! Kwaye iROM ikhawuleza kakhulu, ngaphandle kokusebenzisa kakhulu, kwaye amava am omsebenzisi alungile! Unenguqulo yasebusuku, ayipapasha rhoqo kwaye asebenzisane nabafana Cyanogen ukuphucula iROM nangakumbi ukuba kunokwenzeka. Izolo bendifuna ukubuza imibuzo kumsebenzisi ophumeleleyo, kuba sonke esinayo iTattoo kwaye sisebenzisa iROM yayo, sinetyala elikhulu enkosi:
Umbuzo: Apha silapha. Ijinja kunye nekhamera iyasebenza. Kubonakala ngathi bubuxoki, akunjalo? Ngaba ubucebe ukufika apha?
Impendulo: Ukuba bendicinga ngayo, kwaye ndiyathemba ukuba ndingafezekisa i-100% yokusebenza kwefowuni, yile nto bendiyiqalele yona. Ngokwenyani, yonke into iyenzeka ngenxa yosebenza nabo ebebendincedisa ukusuka kwinguqulelo yokuqala, nakwabo bafakelwe kancinci kancinci.
Q: Ngeliphi ixesha uthathe isigqibo sokuhla kuyo? Ngaba uwulandele umsebenzi we-Ikxdf kunye neFyodor kwasekuqaleni? Ngaba ubusebenzisana nabo ukusukela kusuku lokuqala?
A: Ndisebenzisene nento neFyodor (bullshit), kodwa kuncinci. Ndiqale ndakhathalelwa ngumsebenzi ka-Ikxdf, kodwa ndithe ndakuzibona iinjongo zabo zokungakhuphi kwanto kunye nokusebenzisa gwenxa iminikelo, ndaye ndagqiba kwelokuba ndiyeke kuyo ngokupheleleyo ndiyeke ukupapasha nantoni na. Umzuzu wanyamalala kwizixhobo zethu kuxa ndathatha umsebenzi owenziwe nguFyodor ndaza ndaqala phantsi.
Q: Sonke singanikezela, njengaba basebenzisi. Kodwa yintoni ekwenza ukuba uqhubeke de uyenze?
R: Ndikhuthazekile ngumsebenzi owawusenziwa nguLokko eHTCMania kunye neqela labantu kwiforum. Kubonakala ngathi bekukho imeko entle, kwaye kancinci kancinci bendiyiqinisekisa.
Q: I-Htc Tattoo ayisosiphelo sendlela ephezulu kakhulu. Nangona sibona ukuba iGingerbread ayinangxaki enkulu ekusebenzeni kwiitattoo zethu. Yintoni eyenziwe yiHTC ichanekile kuwe? Ngaba abasebenzisi beli tyala banelungelo lokuziva bekhubekile ngaphandle kohlaziyo?
A: Sixelele ukuba i-terminal yethu ayimangalisi, kwaye ayisiyonto ilungileyo ekusetyenzisweni kwe-3D, isikrini sisisombululo esisezantsi, ayisiyi-OLED, sisikrini esichasayo ... Ndicinga ukuba yingxoxo efanelekileyo kubasebenzisi abafuna amanqaku amaninzi batshintsha isiphelo sendlela. Ukuthi abazukuxhasa kwi-Android 1.6 kukusetyenziswa gwenxa komxholo othi "ISICWANGCISO SESICWANGCISO", ayinguye wonke umntu ofuna izinto ezininzi okanye unemali yokuzihlawulela. Ayisiyiyo eyona nto ibalaseleyo, kodwa ukuba inokusetyenziswa ngeGingerbread ngaphandle kweengxaki, silungiselele ukukhutshwa okutsha okuya kubonisa ukuba i-Tattoo ayinasantya. Abasebenzisi banokulindelwa ukuba bathenge izixhobo ezitsha ngokubonelela ngeempawu ezintsha zehardware kwaye bangathinteli ukufikelela kwiinkqubo ezintsha. Kum nakwabaninzi ndiyithatha njengefowuni elungileyo.
Umbuzo: Kwaye ngoku sinethambo enekhamera. Yintoni eseleyo? Ngaba uza kunamathela kwiCyanogen?
A: Yinjongo yam leyo. Ukuba akukho nto iqhubekayo yenzeka kwiCyanogenMod yoku kwaye unokuzama ukwenza esinye isixhobo. Cofa (Tattoo) kusekuninzi ekufuneka kwenziwe kwaye ndinetyala kakhulu kuluntu lonke lwabasebenzisi beTattoo abebencedisa.
Umbuzo: Ngaba uza kutshintshela kwesinye isiphelo sendlela xa kugqityiwe ukwenziwa kweTattoo? Ngaba uya kuqhubeka neCyanogen kweso siginali? Ngaba uza kuzihambela ngokwakho njengokuba abanye besenza?
A: Ewe, ndiza kutshintshela kwesinye isiphelo sendlela. Logama nje uCyanogenmod eqhubeka nokuba nombono wokuba simahla kubasebenzisi kwaye angatshintshi umgaqo-nkqubo weqela, ndiza kuqhubeka nabo, kungcono ukudibanisa iimpawu ezininzi ukuya elowo ecaleni lakhe. Ngokubhekisele ekubeni ndizibona ndinokwazi okanye akunjalo, andiyiboni ingxaki, kodwa hayi nje ukuba iqela lisebenza. Akukho mfuneko yokuba ndibengumntu ophambili kuyo nantoni na, sitshintsha nje izinto ezincinci zenkqubo yokusebenza, andiboni kulunga kule nto ndiyenzayo
P: Okokugqibela, ndingathanda ukubulela kakhulu ngayo yonke into oyenzileyo kwabo baneTattoo. uyakuze uyamkele iminikelo? Okanye iibhiya ezininzi (phakathi kwazo iseva) zikuthembisile?
RNgosuku owamkela ngalo amalizo iyakuba ngumhla ocinga ukuba kwenziwe into ekhethekileyo, kwaye lonto ayizanga kwaye ndiyathandabuza ukuba izakufika ngenxa yento enje. Ngaphandle koko, ndiyakholelwa ngokwenene ukuba siyenzile iROM kunye, umntu ngamnye unegalelo kwinto ayaziyo, kodwa kum yanele. Njengesiqhelo kwabo bazokujoyina imakethi yezabasebenzi (ngaphandle kwento yokuba izinto azilunganga) Ndicinga ukuba ngumboniso olungileyo wokusebenzisana kunye ngaphandle kwenjongo yokugubungela omnye (kuphela kukuba ndonwabile).
Ngokubhekiselele kumququ, njengoko sendisele ndigqabaze kaninzi, ndithatha ilizwi lakho, nje ukuba ndihambe kuhambo, ndiya kuqaphela ukubona ukuba ngubani osayinayo.
Le ibiyimbali ye-HTC Cofa okanye iTattoo. Isabonakala kwikhathalogu yabaqhubi abaninzi, kodwa yayilityelwe kakhulu yiHTC. Umncedisi, emva kwayo yonke le nto, wathenga enye iHTC, iSifiso. I-HTC yenza iiterminal ezilungileyo, kodwa ngethamsanqa, Sinoluntu olusemva kwabo olwenza ukuba lube lukhulu kakhulu kwaye sinetyala elingaphezulu kwesinye.
Ngale posi, ndizama ukubulela bonke abantu abasebenzayo, ukuze sibe neeROM ezilungileyo kakhulu kwiifowuni zethu. Ndiyabulela yonke i-HTCMania ngezinto abazincedayo, ekucebiseni nasekuphuhliseni. Umlingani wayo weXDA kuba uninzi lophuhliso luphuma apho, kunye nolwazi oluninzi esisebenzisa kulo. Kubantu abanjengoCyanogen, ngokuthatha iprojekthi ye-AOSP ngaphaya kwento onokuyilindela. Enkosi lonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » IHottoo yeHTC. Lowo ulibalekileyo.
Amazwi obulumko; Ndikwanayo ne-HTC Tattoo; kwaye ndingumfundi; Sele ndinobunzima bokugcina ukuze ndikwazi ukuthenga esi sibini isandla sokuthenga i-terminal entsha kwiminyaka emibini okanye emithathu. Intombazana yethu encinci inakho nantoni na abayiphosa kuye; kwaye enkosi kuKalim ungaphezulu kokuyibonisa.
Enkosi kakhulu Kalim ngokwenza okungenakwenzeka ngekhamera 😀
Ngokunyaniseka ... chaza kwaye kufanelekile ukwamkelwa. Andisenayo itattoo ... kwaye yahlala ixesha elide ukuba ihlale ibulela kwaba bantu babini (uLokko noKalimochoAzucarado)
Ndonwabe kakhulu kukufunda oku, ngakumbi ukwamkelwa, kodwa ngakumbi impumelelo. Uyifumene! Akukho nto ingako inokuthethwa kuba iya kuba ncinane ...
Ndiyayiqonda, into efanayo ayenzekanga kubasebenzisi beXperia X10, mini kunye ne-mini pro, ezi nkampani zicinga kuphela ngokuthengisa iimveliso zazo ziyalibala ukuba akukho nto ixabisa umsebenzisi ngaphandle kwenkxaso elungileyo kunye neqela elifanelekileyo. Ayilophawu.
Ndiyakholelwa ukuba abantu abanjengoKalim kunye neqela labangamaziyo abamngqongileyo, abakheke ngokuzenzekelayo, benza umhlaba we-Intanethi ube mkhulu. Ngaphandle kweshishini, abantu abanjengaye benza izinto zibonakale zilula. Akunakuze kuba kufuneka umgudu omncinci, kodwa ewe, ngenxa yokuthobeka kunye nesisa abenziwe ngaso.
Ndonwabile kakhulu zezi ndaba, masibone ukuba abasebenzisi be-SE basinika iindaba ezinje ngeli xesha lifutshane !! kwenye kwaye kwelinye andinakukwazi ukufaka ezinye izicelo kuba inkumbulo yam yothando igcwele.
Ndiyabulela kule nkwenkwe, ndineTattoo kwaye andizukuyitshintsha… ..
Enkosi, Kalim, nabo bonke abantu enisebenzisana nabo
Kude kube nini silinde ikhamera ... enkosi kwaba bantu iitattoo zethu zisexesheni ... nangona iprosesa inganikeli ngaphezulu, singonwabela ihehe. Kubantu abangenayo ipeni efana nam, kwaye ngubani owenze itattoo ngokusisigxina kunye ne-shit baye benza ubomi bethu bube lula
Ubuxoki obucacileyo malunga nohlaziyo lwefirmware kwiimveliso zabo aluchaphazeli iHTC (jonga kwiMotorola okanye kwaSony Ericcson ……), kodwa, kum, iyandikhathaza ngaphezulu kwayo nantoni na.
Ndicinga ukuba ekuphela kwendlela yokuphepha oku kukuthenga i-Nexus okanye ukuya kwicala "elimnyama" kwaye uthenge i-iPhone.
Abo kuthi abane-Motorola Dext abanako ukukhalaza nokuba, nangona iirom zizinzile kuphela e-Eclair, eFroyo bayasilela kakhulu kwaye inye kuphela i-alpha evela kwi-Gingerbread ... kodwa into iyinto.
IMotorola isishiyile kwaye yasikhohlisa.
IiPlas zePlas Plas, iChapó yalo mntu ubalaseleyo kunye nenqaku.
Kutshanje intombi yam ibinengxaki yeselfowuni, kwaye ibinxibe ezikaLokko.
Ukubona oku, bendinomdla, kwaye ndijonga iposti kunye nabanye, ndiyabona ukuba ukukhula kweTattoo kuqhubele phambili kakhulu, ikhamera isebenza ngokuchanekileyo.
Kwakhona indlela yokwenza izinto kunye nokuthozama kwalomntu ayothusi.
Ndiyakuvuyela, kwaye ndiyabulela kakhulu ngokuzinikela kwakho
Wowu! Ndacinga ukuba kufuneka ndithumele iTatoo yam kwimargarine ukuze ndiyifumane kwimithombo yeendaba (http://goo.gl/XNndy). Besele ndiqinisekile ukuba ndim ndodwa othenge le modeli kuba andifundanga nto ngayo.
Ngapha koko, kuya kufuneka sizame ezinye iiROM ukubona ukuba ihamba ngcono ...
Ewe, bendikholelwa nokuba ndim phantse wonke umntu onayo. NGOBUZULULWA ndiye ndanesibindi sokufaka enye iROM (bendikruqukile lupapasho lwe-android 2 kwaye mna ndine-1.6…) kwaye ndineCyanogenMod froyo. Ewe andinayo ikhamera, kodwa ndonwabile.
Ngaba le Gingerbread isebenza kakuhle? Ungacebisa utshintsho kum?
Ukuba ukhathalele kakhulu ngenkangeleko yeselfowuni, andikukhuthazi oko. Kukho izinto ezibonakala zibi. Ukuba into oyifunayo kukusebenza kunye nebhetri ende, kuthatha ixesha. Khumbula ukuba yiBeta kuphuhliso ...
Ewe ndiyavuya ukuba kukho ubomi beTattoo yam endandicinga ukuba sele ndikhona kwiscrapyard, ... ndiyavuya ukuba udliwanondlebe kunye nemibulelo emininzi kuKali ngomzamo, ... ngoku kuya kufuneka ndihlaziye ngokwam ngendlela yeengcambu, kunye nokufaka ii-ROms endingenalo nofifi….
Ndinganika ihlombe kuphela kumdali weli nqaku kwaye ndiphinde ndibulele esidlangalaleni kwakhona umzamo omkhulu kunye nokuzinikezela kwi-lokko kunye ne-kalim. I-HTC inetyala kakhulu kwaba bathengi babini. Konke okugqibelele.
Kulungile ke kuya kufuneka sitshintshe iROM ukuya kumvambo….
Yiyo kuphela ifowuni endikhe ndanayo ebomini bam, kwaye ndinezinto ezininzi ... ndinomnqweno WOKWENENE (kwaye kukho malunga ne-10) ... UKUYITSAYIMA kumgangatho wendlela entle ngayo ...
Ukucotha, ukungabinambeko, kunye nokhangelo olunzulu lwabasebenzisi, kunye nescreen, esenza ukuba kubhlungu ukuyijonga kwaye nangakumbi ukuyichukumisa ... kuba iyayenza le nto iyifunayo ... Kwaye masingatsho kwi-intanethi .. Oko kuyothusa ... umntakwethu unomnqweno weHTC ... kwaye masihambe kukuthelekisa ibhayisikile enamavili amathathu neferrari ... hayi ngesantya, ukuba ayisiyiyo yonke enye into.
Ngowona mkhonyovu mkhulu kwicala lase-Orenji obenziwe bubomi bam kum… ..uThixo… ocekisa umnxeba… .ukuba eyona nto ikwenza ufune ukuyiphucula ……
Siyavuyisana nabo bonke abakhe banokholo kule fowuni… Ndicinga ukuba xa bebeka i-Android 2.2 kuyo, yonke into ibiya kuba ngumbala owahlukileyo.
Molweni nonke, sele ndinayo i-kalimocho rom kwaye iyahamba kakuhle. Andizukuyitshintshela enye ... yenze umsebenzi omangalisayo. ukusuka apha ukuvuyisana kwam
Ndonwabile kakhulu ukufaka iROM. Ndingenise okuncinci kwibhlog yam (ndiyathemba ukuba ayithathwa njengogaxekile): http://9mapaxes.wordpress.com/2011/05/04/mi-mejor-idea-de-la-semana-darle-pan-de-gengibre-a-mi-htc-tattoo/
Kwaye ndiyakhuthaza wonke umntu one tattoo ukuba ayenze, kufanelekile!